လိုတာသုံးတော့ ချစ်သူလေး (for all) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » လိုတာသုံးတော့ ချစ်သူလေး (for all)
လိုတာသုံးတော့ ချစ်သူလေး (for all)
Posted by kai on Feb 24, 2010 in Computers & Technology, How To.., Know-How, DIY | 19 comments
လိုတာသုံးတော့ ချစ်သူလေး (for all) ဆိုပြီး အီးမေးရလာလို့ တင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
စော်စော်ကားကား၊ စီးစီးပိုးပိုး စသဖြင့် မတွေးကြပါနဲ့။ အင်မတန်ကဗျာဆန်တဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တာမို့ ဒီအတိုင်းပဲ ထပ်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ဘယ်သူစုဆောင်းထားသလဲတော့ မသိ။ စိတ်ဝင်စားရင် လိုက်ကြည့်နိုင်ပါကြောင်း..။
http:// https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=6af78d8a85&view=att&a…… ကွန်ပြူတာအတွက် နောက်ခံ ကိုယ့်ပုံနဲ့ မြင်ကွင်း…
http:// http:// www.mcpa.org.mm/ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်…
http://nattabin.ning.com/profiles/profile/emailSettings?xg_source=m…;သရဲ တစ္ဆေ ဘုံ
သိပ်ကောင်းတဲ့ ဟာလေးနော် ကြိုက်တယ်ဗျာ။
Thankzalot for the post!
I found this site about Myanmar history.
Good For us !!1
တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါပဲဗျာ ခံဏီပါရမီကိုနောင်ဘ၀ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ ဒီဘ၀လဲပိုင်ဆိုင်လာမှာပါ ကျေးဇူး(အထူုး)တင်ပါတယ် IT သမားပီသပါတယ်ဗျာ
ဒီလို အသုံးဝင်တာတွေ တစ်စုတစ်စည်းတည်း တင်ပြပေး လို့ကျေးဇူးအများကြီးပါ….
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … အခုလို လေ့လာစရာတွေ ကြည့်စရာတွေအများကြီးပို့ပေးတဲ့အတွက်ပါ ….. ကံကောင်းပါစေ …
THANK YOU VERY MUCH. MY FRIEND. I can’t not use all and I don’t understand all. But, it is very use full for me. Again, thankalot.:)
a yan might tal gya….
I lall yu thar tal..
leawo video converter, http://www.leawo.com/leawo-video-converter/
Bridge to Russian, LLC – Tutor and liaison of Russian and Ukrainian
ခင်ဗျားတို့ စိတ်ထဲမှာ အဲ့သည် သဂျီး ဆိုတဲ့ ဘဲဂျီးကို မွဲစေခြင်ရင်
http://burglish.googlepages.com/fontconv.htm မြန်မာ တခြားဖောင့်မှ ဇော်ဂျီဖောင့် သို့ ပြောင်းချင်ရင်
ဆိုတဲ့နေရာကနေ ခပ်တည်တည်နဲ့ ခိုးချပြီး ပိုစ့်တွေရေးပါလား
Point တိုးပေးဖို့ ပြောနေပါတယ်ဆိုမှ….
ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် point အကြောင်း စိတ်နာလို့ ပြောလိုက်ဦးမယ်။
ဟိုနေ့က မွန်မွန့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရွာထဲဝင်တာ ထုံးစံအတိုင်း ၅၀၀၀ က စရတယ်။ မွန်မွန်က တစ်နှစ်ကျော်သက်တမ်းမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လနီးပါးကမှ ၅၀၀၀ ပြည့်တယ်။
ဂျေဒိုးနပ် ကိုဖြစ်ရော… သူကြီး အဲဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းပေးပါ….